HKEY_LOCAL.....\_........\_FontSubstitutes သွားြပီးMsShell Dlg မှာ ရှိတဲ့ မူလ Serif ကို Ayar ။ Dlg2 မှာ မူလTahoma ကေန Ayar ေြပာင်းေသာ်လည်း - Club Q&A /g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); });
HKEY_LOCAL.....\_........\_FontSubstitutes သွားြပီးMsShell Dlg မှာ ရှိတဲ့ မူလ Serif ကို Ayar ။ Dlg2 မှာ မူလTahoma ကေန Ayar ေြပာင်းေသာ်လည်း
Thank you for yous email reply to me. I regret to inform that I found the all Burmese words appeared were unreadable even though All Ayar Fonts were in my O/S.
Before I got your email, I uninstalled everything( including all Ayer Fonts) in my O/S. After I have installed from Ayar4 CD again, I could type Burmese with different sizes and Styles for MS Office 2007.
After I got your email, I followed your instructions.
1. HKEY......\_.......\_ FontSubstitutes and modify original Serif to Ayer in Ms Shell Dlg and Tahoma to Ayar, in Ms Shell Dlg2. I could not find Any words Zawgyi-one there.
2. I cleared all check marks in the boxes of Accessibility in Options of IE. The problem remained the same.
3.I reset Gmail setting and changed unicode (UTF-80encoding) to default. Ayer Burmese couldnot appear correctly.
4. I notice that unicode (UTF-8) encoding in Gmail setting as well as firefox Options.
I am computer user. I think all Ayar fonts should be added like Zawgyi-One at change keyboards of O/S < key board and Languages< Region and Language< Control Panal. On the others hand I like to know either Ayar add-on software for IE, Gmail and Firefox should be necessary or not.
asked Jul 10, 2011 in ​ေထာက်​ကူ​ြပု by wsayajalov (130 points)
edited Jul 11, 2011 by wsayajalov
Zawgyi-one ကီး​ဘုတ်ကို အင်စ​ေတာ်လုပ်ထား​ရင် ရှိ​ေနလို့​တတ်လို့​ Zawgyi-one လို့​ဆိုလို့​တာပါ။ မရှိရင် ထည့်​လိုက်ယံုပါဘဲ။
​ေအာက်ကပံုကိုြကည့်​ြပီး​ လုပ်ရင် အဆင်​ေြပမယ် ထင်ပါတယ်။
Gmail setting နဲ့​ေတာ့​ မဆိုင်ဘူး​ ထင်ပါတယ်။
firefox config မှာ ြပင်မထား​ဘူး​ဆိုရင်​ေတာ့​ ပံုမှန်အား​ြဖင့်​ အဆင်​ေြပပါတယ်။
ကျွန်​ေတာ်​ေတာ့​ ​ေအာက်ကလို ​ေပး​ထား​တာ​ေတာ့​ အဆင်​ေြပပါတယ်။
like Zawgyi-One at change keyboards of O/S < key board and Languages< Region and Language< Control Panal.
Zawgyi-One ဟာ မိုက်ခရို​ေဆာ့​ကထုတ်​ေပး​ထား​တဲ့​ အခမဲ့​ ကီး​ဘုတ်လက်ကွက်ကို အသံုး​ြပုထား​ပါတယ်။ သို့​အတွက် စာလံုး​ေပါင်း​ မှား​ရိုက်မိြခင်း​ ( ဥပမာ ဝနဲ့​ဝ ၊​ ၈ နဲ့​ ဂ ၊​ ရ နဲ့​ ၇ ၊​ ြ--ြ--ြ---ြ--ြ----ြ---ြ--) နှင့်​ စာ​ေရး​သား​ရာတွင် ကီး​ဘုတ်ခလုပ်​ေပါင်း​များ​စွာ ကို စကား​စုတစ်စု အတွက် နှိပ်ကာ ​ေရး​ရြခင်း​ (ဥပမာ alt+ ctrl ဝါ alt+ ctrl + shift) ြကံု​ေတွ့​ရပါသည်။
ဤကဲ့​သို့​ေသာ် အ​ေြခအ​ေနမျိုး​ကို ​ေရှာရှား​ြပီး​ လွယ်ကူြမန်ဆန်နိုင်သည့်​ ကိုယ်ပိုင် ကီး​ဘုတ်ပရိုဂရမ်ကို အသံုး​ြပုထား​ရြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ လက်ကွက်အသံုး​ြပုြခင်း​ကို Ayar4 CD တွင်ပါဝင်သည့်​ သံုး​စွဲနည်း​ လမ်း​ညွန်တွင် ရုပ်ပံုများ​၊​ ဗီဒီယိုများ​ြဖင့်​ ​ေသချာစွာ ရှင်း​လင်း​ြပသ​ေပး​ထား​ပါသည်။ နား​လည်နိုင်မည်ဟုလည်း​ ​ေမျှာ်လင့်​မိပါသည်။
Ayar add-on software for IE, Gmail and Firefox ..
စိတ်ကူး​ထား​ပါသည်။ ဧရာသံုး​သူများ​အတွက် အထူး​စီမံြပုလုပ် ​ေပး​ရန် ​ေမျှာ်လင့်​ထား​ပါသည်။ သို​ေသာ် ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူများ​သည် အြခား​ ယူနီကုဒ်နွယ်ဝင် ြမန်မာစာလံုး​ကိုပါ ​ေရာြပွန်း​သံုး​စွယ်​ေနသည့်​အတွက် ဧရာြမန်မာစာလံုး​များ​ေြကာင့်​ အြခား​ေသာ စာလံုး​များ​ကို ဖတ်ရှုမရြခင်း​၊​ ​ေရး​သား​ရတွင် အခက်အခဲများ​ ရှိလာနိုင်သည့်​ အတွက် ချင့်​ချိန်​ေနရြခင်း​ြဖစ်သည်။
ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​သည် ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူများ​၏ စက်အတွင်း​သို့​ ဝင်​ေရာက်ြပုြပင်ြခင်း​၊​ ြဖည့်​စွတ်ြခင်း​ကို တိုက်ရိုက်ြဖစ်​ေစ၊​ တွယ်ဝိုက်၍ ြဖစ်​ေစ ပိုင်ရှင် ခွင့်​ြပုချက်မပါဘဲ လုပ်​ေဆာင်ရန် ဆန္ဒမရှိဘဲ၊​ ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူအား​ နား​လည်​ေအာင် လမ်း​ညွှန်ရန်သာ ရည်ရွယ်ထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။
ဧရာြမန်မာယူနီကုဒ်အဖွဲ့​သည် ကွန်ပျူတာသံုး​စွဲသူများ​အား​ လွယ်ကူ ြမန်ဆန် အသံုး​ဝင်​ေစရန်အတွက် အစွမ်း​ကုန် ြကိုး​စား​ေပး​သွား​ရန်လည်း​ ရည်မှန်း​ထား​ေြကာင်း​ပါ။
answered Jul 12, 2011 by mg (1,840 points)
edited Jul 12, 2011 by mg